မေးးmoe-z - အစ်ကို့ဆိုဒ်ကိုတော့ အမြဲတမ်း ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလည်း အစ်ကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကူညီပါအုံး။ ကျွန်တော် youtube ကနေ video ဖိုင်ကို download လုပ်ချင်လို့ . . . အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . . ဘယ်လို download မျိုးသုံးရမလဲ . . . လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး . . . တကယ်လို့များ အစ်ကို connection ကောင်းလို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပို့ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်း ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်...ဖြေးဒီမှာ (or) ဒီမှာ (or) ဒီမှာ တင်ထားပေးပါတယ် . တစ်ခုနဲ့ မရရင် တစ်ခုကို Download လုပ်ပြီးတော့ လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . တော်တော်များများ မေးခွန်းတွေက ကျွန်တော် တင်ပေးထား ပြီးသား ချည်းပါပဲ . မမေးခင် အရင် search box မှာ ရှာစေချင်ပါတယ် . ------------------------------မေးးthar tharးကိုညီနေမင်းခင်ဗျား..တကယ်လို့များ အဆင်ပြေခဲ့ရင် Autocad 2008 Tutorial PDF နဲ့ Adobe Illustrator 10 (or)11 Tutorial PDF ဖိုင်လေးများ တင်ပေးစေ လိုပါတယ်ခင်ဗျား အမြဲတန်း ကျေးဇူးတင်လျှက်ဖြေးကျွန်တော့်ဆီမှာ မြန်မာလိုတော့ မရှိသေးလို့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ စာအုပ် (2) အုပ် တင်ပေးလိုက် ပါတယ် .Book 1 | Book 2------------------------------မေးးကိုညီ ဆီမှာ အကူအညီ တောင်းလို့ရမလား XP အတွက် bluetooth driver လိုချင်လို့ပါ ကျွန်တော့် ကွှန်ပျူအမျိုးအစား က compaq v3772tu ပါ .. ဖြေးဒီမှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . External Mirror 1 ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို နှိပ်လိုက်ပါ .
မေးးအစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ရဲ့ Antivirus ကဒီနေ့မှာ Expired ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ? ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဦးနော်။ Expired ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Virus Scan ကိုထိခိုက်နိုင် ပါသလား ခင်ဗျား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါ။ဖြေးငါ့ညီရေ virus scan ကို မထိခိုက်ပါဘူး . ဒါပေမယ့် ငါ့ညီ update မလုပ်တော့နဲ့ ရက်ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ထွက်တဲ့ virus အသစ်တွေကိုတော့ သတ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး . ဒါနဲ့ ငါ့ညီရဲ့ antivirus program ကဘာလဲ . အဲ့လိုပြောနိုင်ရင် အစ်ကို့အနေနဲ့ ငါ့ညီ Expire ဖြစ်သွားတဲ့ antivirus program အတွက် ကူညီပေးလို့ ရပါတယ် . အခု ငါ့ညီ အမေးကိုပဲ ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် .မေးးkosoeးကိုညီနေမင်း ရေ ညီလေးကို (super proxy helper 1.5) application တင်ပေးပါ ခင်ဗျားဖြေးအစ်ကိုရေ့ ဒီမှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . version ကတော့ 1.0 ပါ .မေးးWindows7က genuine မဖြစ် တော့ လို့ အကို တင်ပေးထားတဲ့ windows7loader 1.8 နဲ့ က မ ရ တော့ လို့ ဘာနဲ့ရ ဦးမလဲ မသိလို့ windows ကအ စက ဘာ မှ ဖြစ် ဘူး ဗျ ကျ နော် က window ကို update လိုက်လို့ ဖြစ် သွား တာ, ကူညီပါဦး ဗျာ . နဲနဲလေးအရေးကြီးနေလို့ပါ .ဖြေးကျွန်တော် စပြီးတော့ တင်ပေးကတည်းက Update မလုပ်ဖို့ အတန်တန် ကြိုမှာထားပါတယ် . အာလဲ ပေါက်နေပါပြီ . update လုပ်လိုက်တော့ကော ဘာတွေများ တစ်အားကောင်း သွားမှာလဲ . ဘာလို့ update လုပ်ချင်ရတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး . အကောင်းဆုံးကတော့ File တွေကို Backup လုပ်ပြီးတော့ window7ကို ပြန်ပြီးတော့ တင်သုံးလိုက်ပါ . နောက်ပိုင်း update လုပ်ချင်တဲ့သူများ တစ်အားကို update လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်ရက်ကနေ ဘယ်ရက်အတွင်း update လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါ့မယ်. ကျန်တဲ့ရက်မှာ သွားလုပ်ရင်တော့ အဲ့လိုပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ . လမကုန်ခင် (၁၀)ရက်အလိုနှင့် လကုန်ပြီး (10 ရက်)အတွင်း ဘယ်တော့မှ update မလုပ်မိပါစေနဲ့ .
ညီနေမင်းDrivers, Laptop Driver များ
HP Compaq 6730s Drivers (window xp)
ဖြေးကဲ အောက်မှာ မရပါဘူးဆိုတဲ့ hp compaq 6730s ရဲ့ Driver တွေပါ . window xp အတွက်ပါ . Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . တောင်းထားတဲ့ညီလေး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Direct link ပါ. နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း Download link ကျလာပါလိမ့်မယ် .HP Compaq 6730s Synaptics Touchpad DriverADI SoundMAX AD1984A Sound Audio Driver for Windows XPUniversal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio (sp33867)Intel Chipset Installation Utility for ICH9 for Windows 2000 and XP Intel Graphics Video VGA Driver and Control Panel HP Compaq 6730s ATI Video Driver and Control PanelMobile Intel4Series Graphics Drivers for Windows XPHP Compaq 6730s HP Quick Launch ButtonsHP Compaq 6730s Chicony Camera Webcam DriverHigh-Definition Audio (HDA) Modem Installer and Driver for Windows 2000/XP (32-bit) HP Compaq 6730s Intel PRO/Wireless WLAN DriversBroadcom Wireless LAN Driver Marvell Yukon Gigabit Ethernet Controller Driver Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology HP Universal PostScript Print Driver (32-bit)SCR33x USB Smart Card Reader DriverIntel Matrix Storage ManagerSCR33x USB Smart Card Reader Driver
မေးးဘိုဘို : mp3, mp4 တွေမှာ ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ starting ပဲပေါ်လာပြီး ဘာမှ အလုပ်ပဲ . တန့်နေတဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးများပြန်ပြင်ရသလဲဆိုတာ အစ်ကိုများသိရင်. ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ဖြေ : ညီလေးရေ အဲ့လိုဖြစ်တာက mp3 (or) mp4 player ထဲမှာ သီချင်းတွေကို အပြည့်ထည့်ထားလို့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်. စက်ထဲမှာ သီချင်းတွေ ပြည့်နေရင် loading time ကြာတတ်ပါတယ် . ဖုန်းလဲ အဲ့လိုပါပဲ . ကိုဝယ်ထားတဲ့ memory card ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ အပြည့် မထည့်ပါနဲ့ . player နိုင်သလောက်ပဲ ချင့်ချိန်ပြီးတော့ ထည့်တာ အဆင်ပြေမှာပါ . တစ်ချို့ player တွေက 1 GB ပဲ နိုင်တယ် . ဒါကို ကိုက2GB card ပြောင်းပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ loading time က ကြာမှာပါပဲ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .----------------------------------------မေးးAung lay89 : အကိုရေကူညီပါအုံးနော် Epson printer TX101 သုံးရတာ အဆင်မပြေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ အကြံပေးပါအုံးနော် ..ဖြေးကိုအောင်လေးရေ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသုံးလို့ အဆင်မပြေတာလဲ မသိဘူး . ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာလေး ပြောပြပေးပါ .-----------------------------------------
Toshiba satellite m 100 Drivers
မေး Ko Oo : I want toshiba satellite m 100 driver.Please ဖြေ : ကဲ အောက်မှာ Download link အတိုင်းသာ Download လုပ်လိုက်ပါ. Windows7အတွက်ပါ .Toshiba Satellite M100 Drivers >> BIOS UpdateToshiba Satellite M100 Drivers >> Bluetooth StackToshiba Satellite M100 Drivers >> Chip Set Utility (Intel)Toshiba Satellite M100 Drivers >> Config FreeToshiba Satellite M100 Drivers >> DVD Player Update Check ToolToshiba Satellite M100 Drivers >> Display Driver (Intel)Toshiba Satellite M100 Drivers >> Fingerprint Software (UPEK)Toshiba Satellite M100 Drivers >> HDD Protection UtilityToshiba Satellite M100 Drivers >> Modem DriverToshiba Satellite M100 Drivers >> Registry PatchToshiba Satellite M100 Drivers >> Sound Driver (Realtek Semiconductor Corp)Toshiba Satellite M100 Drivers >> UtilitiesToshiba Satellite M100 Drivers >> Value Added PackageToshiba Satellite M100 Drivers >> Wireless Lan Driver
ဒါကတော့ Flex Gif Animator ဝါသနာရှင်တွေ အတွက် ကျွန်တော် Flex Gif Animator 8.86 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Animator လေ့လာသူတွေ အတွက်ဆို အဆင်ပြေပါတယ် စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ ကျွန်တော်လဲ ဖျားနေလို့ ဆိုက်ကိုတောင် ပြန်မကြည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ် အခု ဒီဆော့လ်ဝဲလေး ကတော့ Animator လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ ညီတွေ ညီမတွေ အတွက် လိုချင်ရင်အောက်မှာ Download ယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ။ 5.39mb
ဒါကတော့ Animated Wallpaper Maker v2.1.1 လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဆော့လ်ဝဲကတော့ Wallpaper မှာ သက်ရှိပုံတွေနဲ့ တွေရမှာဖြစ်ပါတယ် Wallpaper အလှကြိုက်သူတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုချင်ရင် အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ။ 6.48mb